Dream house 2/4 per 17km Segovia - I-Airbnb
Dream house 2/4 per 17km Segovia
I-CHIMNEY HOUSE ithokomele kakhulu futhi iyinhle kakhulu, inekamelo lokulala elingu-1 elinefenisha enhle enombhede olingana nendlovukazi nombhede oyedwa owengeziwe, igumbi lokugezela, ikhishi-indawo yokudlela, igumbi lokuhlala elinombhede osofa, uvulandi ongaphandle onetafula lokudlela, indawo yokuphumula kanye nengadi.
Indlu kashimula iyingxenye ye-SALTUS ALVUS lapho sinezinye izindlu ezi-2: Indlu Enkulu ka-6/8 pers. kanye neGarden House ngamapheshana ama-2. Ungaba nolwazi olwengeziwe nezintengo zezindlu zethu kwezinye izikhangiso ze-bnb, uma uthanda.
Siyatholakala nganoma iyiphi into noma ulwazi ongase uludinge.
Inombolo yepholisi: CR-40/467